Iindaba zesiXhosa ngo 12:00, 05 eyoMga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa ngo 12:00, 05 eyoMga 2018
Written by Ashia Nkontsa on 05/12/2018
UHlengahlengisa kwe ngqesho kumansipala weli
Umasipala ophantsi kombutho weDemocratic Alliance iStellenbosch namhlanje uvakalise ukuba uzimisele ukutshintsha indlela oqesha ngayo khonukuze kuphepheke izityholo zokuqeshwa kwabantu abangafanelekanga. Oku kulandela emva kokuba lamasipala uhlawulwe isixamali esingangamakhulu asixhenxe namashumi amahlanu amawaka eerandi kuZenobia Campell nobengumgqatswa obesle ethathiwe ukuze asebenze kulamasipala ze kwathatyathwa endaweni yakhe uMellisa Nel obengayifanelanga la-ofisi. Ongusomlomo walamasipala uStuart Grobbelaar uhambise ngelithi olugxeko lwendlela ekuqeshwa ngalo luqalise emveni kwesisiganeko nanjengoko kukholeleka ekubeni uNel usasebenza njengegosa eliphezulu kwisebe lophuhliso lwamaphandle.
KuTshone abantu abathathu eParkway
Kubhubhe isithathu sabantu emva kokuba isithuthi simbonzeleke ebhulorhweni eParkway North kanye phantsi kohola wendlela uN2 kweliphondo lentshona koloni. Kukholeleka ukuba umqhubi wesisithuthi uphulukene nolawulo lwaso nantoleyo ikhokelele kulentlekele ibambisa amazinyo ukanti bobathathu abantu ebebekwesosithuthi bawunabele uqaqaqa. Othethela abakwandabazantu ephondweni Maxine Beizenhout uhambise ngelithi landlela isaxakeke kanobom ukuzakuthi ga ngoku nanjengoko amagosa ezendlela esalivalile elinye icala lendlela ukuze kugqitywe ngokuthatyathwa kobungqina.
Amaqela amane ezepolitiko azoqubisana kwa ward9
Mane amaqela ezopolitiko alindeleke ukuba aqubisane kulonyulo lovalo-zikhewu kwawadi 9 kumasipala waseWitzenberg cebukuhle eCeres namhlanje. Lewadi iye yanesikhewu emveni kokulahla koceba wombutho kakhongolose ukanti abagqatswa baphuma kumbutho weANC, iDemocratic Alliance, iCope kwakunye neEFF. Olulonyulo belilindeleke ukuba lwenziwe kwinyanga ephelileyo kodwa lwahlehliswa emva kokuba iqela lemibutho yezopolitiko liye lakhalaza ngelithi alikwazi ncam ukufikelela eluntwini ukuze kwenziwe imikhankaso yokugay’ivoti.
Kulunywe inkwenkwana eHillsview zizinja
Lukhathazekile usapho lenkwenkwana yase Hillview emva kokuba umntwana wabo elunywe zizinja ezimbini lahlanz’iselwa. Kukholeleka ekubeni lomntwana uminyaka mithandathu ubudala wehlelwe lelishwangusha ezihambela endleleni ebutsheni baleveki nalapho kutyholwa ngelithi ezizinja ziphume kumasango ekhaya lazo, ebelishiywe livulekile, ukanti ophuma kumbutho ojongene nokunqanda inkohlakalo yezilwanyana u Belinda Abrahams uthi ezizinja kungoku nje zibulewe.
Amapolisa abanjelwe ukubaneminwe emide
Abecuphi abaphuma kwigqiza lokulwa namaqela emigulukudu kweliphondo lentshona koloni babambe oogxa babo ababini ngezityholo zokubaneminw’emide. Okukubanjwa kwalamapolisa kulandela uphando lwesikhalazo esifakiweyo emva kogqogqo lwendlu eseBeacon Valley eMitchells Plain. Umkomishinala wamapolisa ephondweni umnumzana Khombinkosi Jula uhambise ngelithi lamapolisa mabini kutyholwa ngelithi azithathele imali ngethuba egqogqa kwelakhaya nalapho aye abonakala kwividiyo ethatha esosixamali singadizwa kwisefu engaphakathi. Sithetha abarhanelwa baphatsi kweliso labakwantsasana eMfuleni yaye balindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla ngomso ngezityholo zobusela.
Kusalindelwe ingxelo epheleleyo yomlilo eSea Point
Umlilo oqhambuke e Sea Point eKapa utshabalalise inxalenye yendlu yesikhungo samaJuda ezinze e-Athur’ Road. Kwingxelo yombutho webhunga lamaJuda omzantsi Afrika YASE kapa ithi akukho monzakalo wenzekileyo kwaye nengxelo zophando zibonisa njalo, kodwa basalindele ingxelo epheleleyo. Isithethi senkonzo zohlangulo nemililo kwisixeko saseKapa umnumzana Theo Lyne uthi bafumene umnxeba ngobusuku baphezolo nalapho kuye kwathunyelwa abacimi mlilo abangamashumi amabini anesibini kuquka nezithuthi ezine, ukanti isizekabani somlilo asikaziwa.